Zizi, rakanyorwa naSamuel Bjørk. Yechipiri kesi yaMunch naKrüger | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Updated on 29/11/2016 21:17 | Nhema nhema
Yechipiri novel mune akateedzana naMunch naKrüger.
Samuel Bjørk, kunyepedzera kwemunyori weNorway Frode Sander Øien (Trondheim, 1969), kusaina bhuku rechipiri, Zizi, kubva munhevedzano yake nyeredzi mapurisa eOslo, Holger Munch naMia Krüger. Uyu munyori anoshanduka-shanduka, zvakare munyori wemitambo, muimbi uye muimbi, akaratidzira mumavara akasiyana siyana uye akadudzira Shakespeare.
Nemanoveli maviri apfuura akabudirira kubuditswa munharaunda yake yekuNorway, Pepsi Rudo (2001) uye Kukurumidza Kwekudya Kwekuseni (2009), Ndinofamba ndega Yaiva yekutanga kushandurirwa muchiSpanish. Mhinduro yakanaka kwazvo kubva kuvaverengi nevatsoropodzi yaunza zita rechipiri iri nekugamuchirwa kwakanaka kwazvo. Y iyo fomula inoita kunge ichiri kumushandira. Bjørk inogona kuzvisimbisa sezita idzva rezita yeiyo isati yapera simba Nordic mhosva inoverengeka.
Ehe, nemvumo yevaunoshanda navo vakaita mumwe Jo Nesbø. Uye ndizvo here Bjørk inoita kunge yakadzidza humwe hunyanzvi nezvezvakakanganisika zano uye kubata zvisizvo. hunhu hwemunyika yake. Vazhinji mafeni eiyo Nordic mhosva yekuverengera avo vakaverenga zvese vachanyatsoona kufanana mukati Zizi, kunyanya kumagumo ayo.
2.1 Ivo protagonists
Una wechidiki anowanikwa akadzipwa musango pamubhedha weminhenga (zizi) uye pakati pe denderedzwa nemakenduru. Dhipatimendi reOslo Homicide rinotora nyaya iyi. Kumberi tinosangana zvakare ne el Inspector Holger Munch. Iye haazeze kutendeukira kune wake wepamusoro mutsvakurudzi zvakare, Mia kruger. Asi Krüger achiri muchimiro chisina kusimba chepfungwa nemafungiro ake ekuda kuzviuraya uye kupindwa muropa nemapiritsi nedoro.
Kuongorora yezvinoratidzika kunge macabre tsika kuuraya zvinokanganisa zvakanyanya nhengo dzinoverengeka dzechikwata chaMunch. Y kuna Munch naKrüger pachavo.
Inonakidza kwazvo, chengetedza danho, ine zvitsauko zvipfupi, zviitiko zviri nyore kuverenga uye zvinonakidza. Sumo yekuvhura inotipa mamiriro enhau kubva kune yakapfuura izvo zvichave nemhedzisiro yakaipa panguva ino. Uye mavara anoratidzika anoita kuti tirambe tichifungidzira nezve kwavo kukuru kana kuderera kubatanidzwa mune iyo kesi. Ehe mumwe wavo ndiye honzeri, asi munyori anotamba makadhi ake zvakanaka uye bluffs nenzira kwayo.
Fans yevatema mune zvese, uye iwo anotonhora lares kunyanya, vanozoziva chimiro uye nzira yekukanda mapfupa kumuverengi mune iyoyo isingakurumidze uye nemazvo rondedzero. Vachaendererawo nekusangana nechikwata chemapurisa akatizivisa. Y pamwe ndizvo zvikonzero zvine huremu hwakawanda kuverenga ino novel. Iwe zvakare une kufarira kugadzirisa iyo kesi, hongu, asi mubvunzo ndewekuti uwane muyero pakati pebumbiro uye mavara zvakanaka. Bjørk anozviwana.
Tsitsi dzangu kubva Ndinofamba ndega akaenda kuna Holger Munch. Huru, ndebvu uye ari pakati pemakumi mashanu emakumi, hunhu hwake, hunonzwisisa asi hunhu husina kutsarukana hunomutungamira kudiwa nekuremekedzwa nevari pasi pake. Akaratidzirwa nekurambana kwemukadzi wake, haana kudzosera hupenyu hwake hwepamoyo. Zvirinani hukama nemwanasikana wake hwakanaka uye, pamusoro pezvose, anofarira muzukuru wake. Asi haapedze kutarisisa kana kuseta zvinangwa, kunyangwe achifunga kuti zviri kuitika kupfuura kusava netariro. Iyi kesi inokukanganisa iwe pachako kwazvo nzira.
Kana zvakadaro Mia Krüger, kwake kukuru kusagadzikana kwepfungwa ramba uchimutungamira kune pfungwa yekuzviuraya. Izvo hazvina kukwana kwaari, kana iye haana hanya, kutorwa seakanakisa. Ari mumachinjiro evakuru vake, vanomumanikidza kuti agamuchire kurapwa kwepfungwa uye nekumuchengetedza kugona kwake kugona kwake oga. Nekudaro, uye Mune aya maonero angu ekuzvininipisa semuverengi, zvainge zvatova zvishoma kukwenya mune yekutanga rondedzero kusimbirira kwemunyori mukusimbisa hunhu hwake hwekutambudzwa kuitira kuti isu tishamisike nekusiyana nehunyanzvi hwake hwekuferefeta.
En Zizi kusviba kwehunhu kunoramba kuchimanikidzirwa. Tinomuona achidzokororazve achishamisika nezvaari kuita pasirese, achiwana nguva dzisina kana chinhu uye hapana ane basa nazvo. Kusvikira kune iyo inounza mhinduro. Ndiyo poindi iyo hunhu hwaKrüger husingandibvumidze nayo. Ndiye akasimba, anoda kuoneka asina kusimba uye tese tinoziva kuti acharamba achisimba. Zvinotarisirwa. Kana kutoverenga akawandisa nguva.
Kune zvimwe zvese, zvechipiri izvo zvakavakomberedza kumira zvakare. Iyo Hacker musayendisiti wemakomputa Gabriel Mørk, murwiriri Ludvig Grønlie, ari pakati-peCurry, anonwa uye anobheja uye pano aine matambudziko ehukama akakomba ... Ivo vese vanogadzira inonakidza mosaic yemavara ayo anonyatso kupfekedza ivo protagonists. Zvakare mhuri yaMunch kana fungidziro dzinoonekwa nekutsausa muverengi. Mamwe acho anoshanda nemazvo, asi mamwe anongori ekufungidzira kwekutarisa ikoko. Kunyange zvakadaro, iyo dambanemazwi inogadziriswa nekubudirira.
Imwe yakanaka sampuro yema genre uyo akakwanisa kuisa nzvimbo yake pakati pevakawanda vakabudirira mazita madema atova kubva kunotonhora Nordic nyika. Izvo hazvina kundinakidza ini, pamwe nekuti ini ndiri mukuru wega protagonist (uye nechishuwo chemurume), pane vaviri vevaongorori. Asi inoshanda, inochengetedza fungidziro uye inopera nemugumo unotarisirwa. Inonakidza uye iri nyore kuverenga. Zvisinei, chii unogona kutevera nzira yeBjørk .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Nhema nhema » Zizi, rakanyorwa naSamuel Bjørk. Chechipiri kesi yaMunch naKrüger